जसपमा को को गर्नुभयो प्रवेश ? – Sahara Times
जसपमा को को गर्नुभयो प्रवेश ?
८ चैत्र २०७८, मंगलवार ०६:४३
पर्सा चैत ८ गते । विभिन्न दल परित्याग गरि हिजो जनता समाजवादी पार्टीमा हजारौको सँख्यामा जनता समाजबादी पार्टी नेपालमा नेता कार्यकर्ताहरु प्रबेश गरेका छन् । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा जसपा पार्टी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ द्वारा आयोजित आमसभा तथा बृहत पार्टी प्रबेश कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओबादी, लोसपा लगायतका अन्य पार्टी परित्याग गरि हजारौको सँख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु जसपा नेपालमा प्रबेश गरेका हुन् । पोखरियाका चर्चित नेता राजु साह तेलीसहित उहाँको नेतृत्वमा हजारौकोे सँख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु जसपामा प्रबेश गरेका थिए ।
यसैगरि पकहा मैनपुर गाउपालिकाबाट पनि सयौको सँख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु जसपामा प्रबेश गरेका थिए । नव प्रबेशीहरुलाई जसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माला र टिका लगाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो । पार्टी प्रबेश कार्यक्रममा पर्साको बिभिन्न पालिकाहरुबाट नेता कार्यकर्ताहरु जसपामा प्रबेश गर्नको लागि कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए ।
जसपा पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रिय अध्यक्ष नागेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा सम्पनन भएको आम सभा तथा पार्टी प्रबेश कार्यक्रममा पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का संघीय सांसद हरि नारायण रौनियार, मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गदी, प्रदेश सांसद मन्जुर अन्सारी, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् जसपा नेता प्रदिप जैसवाल, पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवम् जसपा नेतृ सल्मा खातुन लगायत नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसअघि सोमबार नै वीरगञ्जमा पनि सयौको सँखयामा अन्य पार्टी परित्याग गरि नेता कार्यकर्ताहरु जसपामा प्रबेश गरेका थिए ।
Tags: #harirauniyar, #JSPNEPAL, #parsa, #upendrayadav
२३ औं फ्लोरा एक्स्पो हुँदै
एमालेका केन्द्रीय सदस्य रञ्जु ठाकुर जसपामा प्रवेश